Abaneme abagijimi ngokuhlehliswa kwemiqhudelwano nemijaho yi-ASA - Impempe
Abaneme abagijimi ngokuhlehliswa kwemiqhudelwano nemijaho yi-ASA
Umgijimi weBoxer Running Club, uGladwin Mzazi ushiye angalazi ngenhlangano eyengamele ezokusubatha kuleli, i-Athletics South Africa, ayisola ngokungabeki izidingo zabagijimi phambili nokuthi iphethwe sengathi isphaza.
Lokhu kulandela ukuhlehlisa kwe-ASA yonke imimcintiswano nemihlangano yezokusubatha ngamasonto amabili, ibeka ukwenyuka kwezibalo zabahaqwa yiCoronavirus njengesizathu sokumisa yonke into.
UMzazi ukhale ngokuthi i-ASA ihlulwa yini ukwenza njengabebhola, khilikithi nerabhi iqinisekise ukuthi kulandelwa yonke imigomo nemithetho yezokuphepha nezempilo mayelana neCoronavirus bese kuqhutshekwa nomsebenzi.
“Kuyaqhutshekwa nomsebenzi ebholeni, kukhilikithi nakurabhi. Kodwa kwezokusubatha, siphathiswa okwama amesha,” usho kanje uMzazi embikweni oshicilelwe yi-thetoprunner.co.za.
“I-ASA izibhekelela yona yodwa, futhi iyavilapha ukubhekelela izidingo zabasubathi bese ibaphathise okwezingane. Ngiphoxeke kakhulu ukuthi iCross Country Trials nayo ihlehlisiwe. Bakwenza kanjani lokho sekusele izinsuku ezine kuyiwe emjahweni?”.
Uthe yena nomkakhe uLebo Phalula bese beziqeqeshe kanzima belungiselela lo mqhudelwano futhi kubadumaze kakhulu ukuhlehliswa kwawo sekusele izinsukwana uqale.
“Siphethwe abantu abavilaphayo, abavele babalekele izinkinga. I-ASA kumele ikopele kwiCGA (Central Gauteng Athletics) ekwazile ukuqhubeka nomqhudelwano wayo ngempumelelo. Bangakwenza lokhu ngaphandle kwezibukeli bese bevumela abasubathi abaphambili ukuba baqhudelane.
“IKenya nayo ibinomqhudelwano we-cross country ngesonto elidlule, futhi nabo babhekene nalo lolu bhubhane lweCovid-19 ezweni labo. Ne-Ethiopia nayo isanda kuba nomjaho esikhathini esingesingakanani esidlule. Thina sinabaholi abanqenayo ukucabanga,” kuchaza uMzazi oneminyaka engu-32.
Lo mgijimi osebe ngumpetha wakuleli ebangeni lika-5000m izikhawu ezimbili, uthe abasubathi bebengeke babe nenkinga yokuzikhokhela ukuhlolelwa iCoronavirus uma i-ASA ingafuni ukusebenzisa eyayo imali.
“Imithetho kahulumeni iyakuvumela ukuqhubeka kwezemidlalo ezisezingeni elikhokhelayo ngaphansi kwemigomo eqinile yezokuphepha. Dedela abasubathi bagijime, uyeke imidlalo iqhubeke. Kumele basichazele ukuthi kungani behudula izinyawo esikhundleni sokusiza abasubathi,” kusho yena.
Nomqeqeshi wabagijimi osezakhele igama ngokusiza uBongumusa Mthembu awine iComrades Marathon izikhawu ezimbili, uXolani Mabhida akayizwa eyokumiswa kwezokusubatha.
“Umbuzo wami uthi kwenzeka kanjani abasubathi bengakavunyelwa ukuncintisana kube kuqhutshekwa nebhola? Kungani singabi nemigomo nemibandela yokuqinisekisa ukuthi abantu bayaqikelela futhi bayayilandela imithetho yeCovid-19 bese beqhubeka nemijaho yabo?,” kubuza uMabhida.
Umengameli we-ASA, u-Aleck Sikhosana uthe lokhu okushiwo nguMzazi noMabhida kulula ngomlomo kodwa ukukwenza kunzima.
“Ngeke sikwazi ukubeka izimpilo engcupheni ngokuthi sivulele imiqhudelwano iqhubeke. Sisicabangisisile isinqumo sethu sokuhlehlisa yonke into. Sizophinde sibheke isinqumo sethu ngoFebhuwari 7. Sicela abasubathi bazame ukuqonda izinqumo zethu nokuthi baqhubeke nokuzicija bangaphelelwa yithemba,” kuchaza uSikhosana.
Previous Previous post: UShandu weMaritzburg wethembisa abalandeli iwini kwiPirates
Next Next post: Usekhumbule uLepasa noMabasa umqeqeshi wePirates ehlulwa ukushaya amagoli